Archive du 20200130
Guy Rivo Randrianarisoa “Tsy nitady seza, ary tsy mpamadika aho”
Mamerimberina eto ireto namana vitsivitsy ankoatra ny mpankahala izay milaza fa Guy Rivo Randrianarisoa mivadika, mandoka efa nandefa CV hiditra governemanta.
Governemanta Minisitra 6 nesorina, 10 olom-baovao
Tontosa omaly teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha ny fanovana governemanta.
Mahatoky tena loatra ny fanjakana Mampitandrina an-kolaka ny HCC
Niaraha-naheno ny filazan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenena na ny HCC Atoa Jean Eric Rakotoarisoa fa tokony hirosoana ny fifidianana governora.
Madagasikara Tsy handroso mihitsy raha tsy voafehy ny fitsinjaram-pahefana
Ny zava-misy eto Madagasikara, any ambanivohitra dia mbola amin'ny fomban-drazana ny fambolena sy fiompiana ka tsy mety tafita any amin'ny tantsaha ireo teknika moderna.
Fandriampahalemana Niova ny minisitry ny filaminam-bahoaka
Nandritra ny fanononana ny minisitra vaovao omaly teny Iavoloha, ny mpiandraikitra ny miaramila sy ny zandary nijanona ao anaty governemanta fa ny minisitry ny filaminam-bahoaka no niova.
Fiara mibahan-dalana Petahan’ny kaominina « taquet d’arrêt » avy hatrany
Raikitra ary tsy misy indrafo ny fanasaziana ireo fiara mijanona amin’ny toerana tsy azo ijanonana eto Antananarivo Renivohitra.
Minisitry ny tanora sy fanatanjahantena Malagasy Mbola voatazona i Raharoarilala Tinoka Roberto
Tontosa omaly alarobia 29 janoary tolakandro teny amin’ny lapam-panjakana eny Iavoloha ny fanovana mpikambana eo anivon’ny governemanta tarihan’ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Ligim-paritry ny baolina kitra Malagasy Notoloran’ny Ong Friends Of Madagascar fitaovana an-tapitrisany
Nikaroka mpiara-miombon'antoka ny “Commission Foot-Ball de jeune” ao amin’ny FMF “Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra”
Orange Pro-League fihodinana faharoa Hoezahin’ny Fosa Juniors Boeny ho tazomina ny “double” azony
Vonona hitazona an’ireo anaram-boninahitra dia ny anaram-boninahitra maha-tompondakan’i Madagasikara azy sy ny anaram-boninahitra maha-tompon’ny
Tsy mbola maloton’ny politika
Tanteraka io ny fanovana mpikamban’ny governemanta. Tsapa ho nivoaka sempotra ihany ny Filoha sy ny Praiminisitra teo am-pandrafetana azy.
Tolotra Hetraphone Hanamorana ny fampidiran-ketra
Notontosaina tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny ministeran’ny toekarena sy ny fitatanam-bola Antaninarenina ny
Velon-taraina ny mpampianatra «Kely karama izahay kanefa miasa be »
Re matetika tato ho ato, rehefa miresaka fanabeazana, fa mitotongana ny fampianarana eto Madagasikara.
Depioté Rodin Rakotomanjato Nanolotra dabilio tao Ambohimandry
Tonga nanotrona ny fametrahana samboady ny Ben’ny tanana voafidy tao amin’ny Kaominina Ambohimandry Atoa Rakotoarisoa Réné Fidèle,
Tovovavy namono tena teny Andohatapenaka Vokatry ny resa-pitiavana
Tovovavy iray manodidina ny 25 taona, omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany no nikasa hamono tena teny Andohatapenaka ampitan’ny kianja Maki, lalovan’ny reniranon’Ikopa.
Mpivarotra etsy Tsaralalana Manomboka miverina amoron-dalana
Manomboka miverina amin'ny laoniny maka toerana tsimoramora ny mpivarotra amoron-dalana eo Tsaralalana ankehitriny.
Mpivarotra eny Mahazo Nitokona nanoloana ny lapan’ny tanànan’Analakely
Nitokona nanoloana ny lapan’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra omaly folakandro ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna eny Mahazo.
Mpamily fiarakaretsaka Mitanaka vava fotsiny taorian’ny fety
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny maitso ahitra isika ankehitriny.
Odon Michel Andriamamonjisoa “Lany tany am-ponja ny fahatanorako”
Antsirabe Taolam-paty 3 kitapo hita tao anaty lakandrano
Miparitaka indray tato ho ato ny taolam-paty ao Antsirabe ao. Ny harivan’ny talata teo, nahitana taolam-paty miisa 97 tao anaty lakandrano iray tao Vohitrarivo Antsirabe I.
ANOSIBE Mahazo vahana ny halatra finday amin’ny hariva
Mirongatra ny harom-paosy eny amin'ny faritra Anosibe sy Anosizato.